RFID Card ကို, စမတ် Tag ကို, CPU ကိုကတ်, RFID အင်းလေး, RFID တိရိစ္ဆာန် Tag ကို, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, စမတ်စောင့်တပ်ဖွဲ့ကင်းလှည့်, AIDC, E-လက်မှတ်, စတစ်ကာများ, RFID တံဆိပ်တပ်ရန်, anti-သတ္တု Tag ကို, NFC ကိုလက်ပတ်, RFID လက်ကောက်, Keychain, LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အချိန်တက်ရောက်, လက်ဗွေသတ်မှတ်ခြင်းစက်ပစ္စည်း
RFID Clam Shell ကကဒ်, EM4102 Clam Shell ကကဒ်, T5577 Clam Shell ကကဒ်, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး clamshell Card ကို
J3H081 Chip Dual-Interface ကို CPU ကိုကတ်, မူရင်း NXP J3H081 Chip Dual Interface CPU ကတ်
RFID ကွန်ကရစ်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု Tag ကို, RFID ဘိလပ်မြေခြေရာကောက်စီမံခန့်ခွဲမှု Tag ကို
RFID အရောင် Soft Silicone ချိန်ညှိနိုင်သော လက်ပတ်, NFC အရောင် Soft Silicone Adjustable Bracelet
Desfire EV3 2K / 4K / 8K Chip Card, Desfire EV3 2K / 4K / 8K Logic Encryption Card, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော DESFIRE EV3 စမတ်ကတ်သည် Mifare Chip အသုံးပြုမှုကို တုပနိုင်သည်။
တစ်ကြိမ်သုံး Paste Theme Park ရေစိုခံသတ်မှတ်ချက်လက်ပတ်, တစ်ခါသုံးဆိုးသွမ်းသောရဲတိုက်ကစားကွင်းသက်သေခံလက်ကောက်
1. စိတ်ကြိုက် RFID Single-sided Etching Antenna/Double-sided Etching Antenna
အဆိုပါဖောက်သည် HF ထောက်ပံ့ / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တာနာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, ဖိုင်ကို format နဲ့ AUTO CAD (.dwg), ကျနော်တို့အတွက်ကိုးကား 24 နာရီ, အဆိုပါကိုးကားစရိတ်ပန်းကန်ချမှတ်ခြင်းစရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန် quotation အပါဝင်သည်, နည်းပညာပိုင်းအရအသေးစိတ်အတည်ပြု, သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်, ကျနော်တို့အတွင်းအင်တင်နာ layout ကိုပေးသွားမှာပါ 24 နာရီ – ဖောက်သည်အတည်ပြုချက် – ဖောက်သည် Confirm ပန်းကန် layout ကိုနှင့်လစာပန်းကန်ကြေး – ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်နေ – ပန်းကန်ချမှတ်ခြင်းနှင့်နမူနာထုတ်လုပ်မှု – ဖောက်သည်အတည်ပြုချက်ကို 20 ~ 400pcs အခမဲ့နမူနာများကို.
Aluminium/Copper double-sided etching antenna ကို PET/PI ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.